म खुल्ला किताव – प्रियंका-Nagarikaawaj.com
म खुल्ला किताव – प्रियंका
प्रियकां कार्कीलाई अहिले नेपाली रतपटकको सबैभन्दा व्यस्त नायिका मानिन्छ । उनीद्धारा अभिनित चलचित्र नाई नभन्नु ल २ ले अघिल्लोवर्षको अन्तिमतिर हलमा लागी नयाँवर्षमा सवैभन्दा वढि कमाउने चलचित्र समेत वन्यो । उनिद्धारा अभिनीत चलचित्र आवरण शुक्रवारवाट अल नेपाल लागेको छ भने मेरो वेस्ट फ्रेण्ड प्रदर्शनको क्रममा छ । नेपाली चलचित्रकी अहिलेकी सवैभन्दा चल्तीकी यिनै नायीकासँग रामजी ज्ञवालीको जम्काभेटमा भएको कुराकानीको सम्पादित अशं ।
चलचित्र आवरण अहिले शुक्रवारदेखी रिलीजमा आएको छ कस्तो प्रक्रिया पाउनुभएको छ ?
– अहिले मैले पाएको जानकारी र आवरण युनिटले पाएको खवर अनुसार चलचित्रले उत्साहजनक व्यापार गरेको छ । आशा छ, आगामी दिनमा चलचित्रले उत्साह जनक व्यापार कायम राख्नेछ ।
चलचित्र आवरण हेरेका अथवा नहेरेका दर्शक र तपाईका फ्यानहरुले तपाईको आवरणको वारेमा जान्न चाहे भने ?
– म खुल्ला किताव जस्तै मान्छे । केही त्यस्तो रहस्यमय कुरा केही पनि छैन । केही पनि लुकाएर राखेकी छैन । एउटा चलचित्रमा काम गर्ने मिहेनती नायीका । यतिले पनि नपुग्ला एउटा सच्चा नेपाली चेलि । जो नेपाली चलचित्रमा दिनरात लागेकी छु । यद्यपी वाहीरी आवरण सवैजसोलाई थाहा छ, देख्नुभएको छ । भित्री आवरण थोरै भन्छु, रिस एकदमै कम उठ्छ । अन्तिम समयसम्म रिसाउन्न । यदि रिसा एभने अलिकति वढिनै रिसाउँछु । सहयोगी भावना छ ।
आफ्नो ख्याल आफै कत्तिको गर्नुहुन्छ ?
– एकदमै गर्छु नी । धेरै व्यक्तीहरु अरुको वास्ता वढि गर्ने, ख्याल वढि गर्ने गर्छन । तर म पहिला आफ्नो वढि केयर गर्छु अनि वल्ल अरुको ।
आफ्नो सुन्दरता कायम राख्न के गर्नुहुन्छ ?
– मैले हरेक काम समयमै सिध्याउनुपर्छ भन्छु । समयअनुसार आफुलाई चलाउछु । आफु अनुसार समय हैन । आफ्नो शुन्दरताको ख्याल कसरी गर्नुहुन्छ ? खाना समयमै खाने पानी सफा, समयमै सुत्ने । झण्डै ७ देखी ८ घण्टा । फिल्म लाईनमा ६० वर्षजति गरिन्छ । फिल्म लाईन वाहेक अरु केही हुदैन । अभिनय राम्रो गरेर कसरी दर्शकको मन जित्न सकिन्छ भन्ने तिर मात्रै मेरो ध्यान केन्द्रित गर्नेछु ।
अहिले सम्म झण्डै आधादर्जन चलचित्रमा अभिनय गर्नुभयो, सवैभन्दा सन्तुष्ट कुन चलचित्रवाट ?
– मैले सुरुमा अभिनय गरेको माई वेष्ट फ्रेण्ड अव केही हप्तामै रिलीजमा आउदैछ । यदपी त्यसपछि अभिनय गरेका चलचित्रहरु नाई नभन्नु ल २, झोले, सुन्तली, माला र भ्रखरै अभिनय गरिराखेको पुन्टे परेड हरेकवाट सन्तुष्ट हुन्छु । म आफ्नो काममा सन्तुष्ट हुन सिक्छु ।
जिन्दगीनै चलचित्र हो भन्ने सोच्नुभएको छ ?
– हो, मैले जिन्दगीनै चलचित्रसँग दाजेकी छु । ६० वर्षसम्मनै अथवा सक्दासम्म चलचित्रमै काम गर्ने ईक्षा छ ।
चलचित्र क्षेत्रमा सधै यस्तै प्रभाव जमाईराख्न के गर्नुहुन्छ अव ?
– दर्शकहरुले निकै मायाँ गर्नुभएको छ । त्यसैअनुसार मैले मिहेनत पनि गरिराखेकी छु । २ वर्षदेखी यो लाइनन्मा छु । अझै मिहेनत गरेर दर्शकले चाहे अनुसारको अभिनय गरेर दर्शकसँग नजिक रहने प्रयास गर्नेछु ।